စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောသတင်းများဖြင့် KDE 4.8 Beta 1 ကိုရနိုင်သည် Linux မှ
KDE ၄.၈ Beta 4.8 ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောသတင်းများဖြင့်ရရှိနိုင်သည်
ဒီနေ့ဖြစ်ခဲ့တယ် ရရှိနိုင်မှုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် de KDE 4.8 Beta1 ကိုအရာအချို့အတွက်သတင်းများပါလိမ့်မယ် applications များ, Workspace နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပလက်ဖောင်း.
အဆိုပါအဖွဲ့သည်ချဉ်းကပ်မှု KDE ယခု bug များကိုပြုပြင်ခြင်းနှင့် desktop လုပ်ဆောင်နိုင်မှုကိုပိုလန်လုပ်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ဤဗားရှင်း၏အထူးများမှာ -
Plasma Workspaces အတွက် Qt လျင်မြန်စွာ - အမြန် Qt သည် Plasma Workspaces ၏အစိတ်အပိုင်းသစ်များထဲသို့စတင်ဝင်ရောက်နေသည် plasma သစ်တစ်ခုကမ်းလှမ်းပါ API ကို နှင့်အတူဝစ်ဂျက်အတွက်အကောင်အထည်ဖော်မှုများအတွက်စံ ကွညျ့ရှု & ခံစားရ ၏ဇာတိ plasma.
Device Notifier သည်၎င်းအစိတ်အပိုင်းများကိုအသုံးပြုရန် ported ထားပြီးဖြစ်ပြီးဖြစ်သည် QML စင်ကြယ်သည်
Kwin window switcher သည်ယခုအခါအခြေခံသည် QMLအသစ်ပြတင်းပေါက် switching ဒီဇိုင်းများများအတွက်လမ်းခင်း။
လပိုင် ၎င်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်၊ တိုးချဲ့နိုင်မှုနှင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအမြင်အာရုံအသွင်အပြင်အတွက်ပြန်လည်ရေးသားခဲ့သည်။
သုံးစွဲသူအားလုံး၏အတွေ့အကြုံကိုတိုးတက်စေရန်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှုများနှင့်အမှားပြင်ဆင်မှုများများစွာပြုလုပ်ခဲ့သည် KDE နှင့် Workspace ကိုပိုမိုထုတ်လုပ်မှုနှင့်ယခင်ကထက်သုံးစွဲဖို့ပိုပြီးပျော်စရာဖြစ်လိမ့်မည်။
La KDE Software Build၎င်း၏စာကြည့်တိုက်များနှင့်အသုံးချပရိုဂရမ်များအားလုံးအပါအ ၀ င် open source license အောက်တွင်လွတ်လပ်စွာရနိုင်သည်။ ဆော့ဝဲ KDE ထံမှအရင်းအမြစ်ကုဒ်နှင့်အမျိုးမျိုးသော binary formats အတွက်ရရှိသောနိုင်ပါသည် http://download.kde.org သို့မဟုတ်၏အဓိကဖြန့်ဝေမဆိုနှင့်အတူ GNU / Linux များ နှင့်စနစ်များ UNIX.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင် » KDE ၄.၈ Beta 4.8 ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောသတင်းများဖြင့်ရရှိနိုင်သည်
ငါ developer များအရင်းအမြစ်များပိုလျှံသုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချဖို့ဂရုစိုက်ဖို့သွားမယ့်အခါ, ငါသိချင်ပါတယ်, မဖြစ်နိုင်တာမစ်ရှင်ဖြစ်သနည်း
ကံမကောင်းစွာပဲငါဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်ဟုမထင်ပါ ဒါ့အပြင်ဒီနေ့ရဲ့နည်းပညာတိုးတက်မှုနဲ့အတူအဲဒါဟာ ဦး စားပေးကိစ္စလို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူး။ ငါဆန္ဒရှိမယ်၊
အရင်းအမြစ်များစွာလောင်ကျွမ်းသည်ကအခြားပတ် ၀ န်းကျင်များတွင်သုံးစွဲသည့်အရာနှင့်တူသည်။ စာရေးကိရိယာ။
Compiz ဖယ်ရှားခြင်းနှင့် Akonadi နှင့် Nepomuk တို့ကိုလည်းဖယ်ရှားခြင်း KDE သည် 120MB ထက်နည်းသောသုံးစွဲမှုဖြင့်ကျွန်ုပ်ကိုစတင်ခဲ့သည် started
တ ဦး တည်းအရာရှင်းလင်း။ သင့်တွင် (ဥပမာ)4Gb RAM ရှိလျှင်၊ KDE သည်သင့်တွင် 1 Gb RAM ရှိခြင်းထက် applications များအတူတူပင်ဖွင့်ထားခြင်းထက်ပိုမိုသုံးစွဲလိမ့်မည်။ ထို့နောက် KDE သုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချလိုပါက ၁၀ မိနစ်ခန့်တွင် setting အချို့ (terminal မပါရှိပါကဂရပ်ဖစ်) ကိုထိခြင်းဖြင့် ၃၀ မိနစ်ခန့်ရှိသော RAM (သင်၌ ၄ Gb ~ သင့်အတွေ့အကြုံရှိ) သို့လျှော့ချနိုင်သည်။
ထို့နောက်သင်စားသုံးမှုကိုသားရဲသို့လျှော့ချလိုပါက KDE ၏ကျက်သရေအချို့ပျောက်ဆုံးသွားသော်လည်းစာရေးကိရိယာကိုသင်ဖယ်ရှားပေးသည်။ ထို့နောက်သင်ပိုမိုမြန်ဆန်စေလိုပါက Qt (သို့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်လျှင် Qt Quick) တွင်ရေးသားထားသော application များကိုသာအသုံးပြုပြီး GTK ကိုမေ့လိုက်ပါ။
1- Nepomuk နှင့် Akonadi ကိုပိတ်ပါ။
3- Alt + F2 ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ အောက်စီဂျင်ချိန်ညှိချက်များ (ကိုးကားချက်များမရှိပဲ) ရိုက်ထည့်ပါ။ ၀ င်းဒိုးပွင့်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက် "ကာတွန်းများကို Enable" (သို့) အလားတူအရာတစ်ခုကိုဖြုတ်ပါ။
4- စာရေးကိရိယာအချို့ (သို့မဟုတ်အားလုံး) ကိုဖယ်ရှားပါ။
၅။ သင် Kubuntu (သို့မဟုတ် Ubuntu KDE ဖြင့်အသုံးပြုပါက) မလိုအပ်သော GTK Apps များကိုဖယ်ရှားပါ။ Terminal နှင့်: sudo apt-get clean && sudo apt-get autoremove && sudo apt-get update
အကယ်၍ KDE သည်သင့်အတွက်နှေးကွေးနေဆဲဆိုလျှင်သင်၏ဂရပ်ဖစ်ကဒ်အတွက်မည်သည့်မောင်းနှင်အားကိုသင်အသုံးပြုနေကြောင်းစစ်ဆေးပါ၊ ၎င်းသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်၎င်းတို့အားအဆင့်မြှင့်တင်ထားကြောင်းနှင့်သီအိုရီအရမူဗားရှင်းအသစ်တိုင်းတွင်သူတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာခြင်းဖြစ်သည် (KDE ဗားရှင်းများတွင်လည်းအလားတူဖြစ်သည်) သင်ဘာမှမတွေ့မြင်သေးပါကမည်သည့်အကြောင်းပြချက်ဖြင့်မဆိုသင်၏ကွန်ပျူတာသည် KDE နှင့်အဆင်မပြေပါကထိုအခြေအနေတွင်အခြားပတ်ဝန်းကျင် (သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ) ကိုအသုံးပြုပါ။ KDE ၏ "ပုံကြီးချဲ့သောစားသုံးမှု" သည်ဖြစ်ရပ်မှန်ထက် linux ဒဏ္endာရီများသာဖြစ်သော်လည်းအထူးသဖြင့်ဖြစ်ရပ်များ ... နှုတ်ခွန်းဆက်သမှုများ!
အကောင်းဆုံးမှတ်ချက် !!!! 😀
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ $ ကျွန်ုပ်အနေနဲ့ Uni အတွက် OFF mode (ရာသီအလိုက်ရာသီပြီးနောက်) FromLinux သို့ပြန်လာပြီးအခုဟားခါးအသစ်တွေအားလုံးကိုဖတ်ပြီးပြီလို့ပြောဖို့ဒီအခွင့်အရေးကိုယူခဲ့ပါတယ်။
ရွှင်လန်း !! 😀
အရာအားလုံးအသစ်ကိုဖတ်ပြီးပြီလား သူကပြောတယ် ... LOL သင်ဖတ်ရှုဖို့လိုတယ် !!! ..
သင်အသင်း ၀ င်မှကြိုဆိုပါ၏
KDE (၃ နှင့် ၄) ကိုမတူညီသောအချိန်များတွင် (ငါ Linux အခြေပြုစနစ်များကိုသုံးခဲ့သည့်အနည်းဆုံးလေးနှစ်အတွင်းအနည်းဆုံးခုနစ်ကြိမ်) ကြိုးစားခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုအလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားအမြဲတမ်းထင်ရသည် ကောင်းမွန်သောပတ် ၀ န်းကျင် (နှင့်ယခုအချိန်တွင်၎င်းသည်အဖွံ့ဖြိုးဆုံးနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်) ။ LXDE နှင့် Unity တို့လည်းကျွန်ုပ်နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည် (ငါ မူတည်၍ ၎င်းကိုပိုမိုစမ်းသပ်။ တိုးတက်မှုအတွက်အချိန်ပေးရမည်ကိုငါသိသော်လည်း)
Enlightenment, XFCE နှင့် Gnome နှင့်အတူကျွန်ုပ် ပို၍ သက်သောင့်သက်သာရှိသည်။ ယခု Gnome-shell ဖြင့်ပင်အစိမ်းရောင်ရှိသော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကောင်းတစ်ခုရရှိစေခဲ့သည်။
Mutter သည် Compiz နှင့် Kwin တို့၏နောက်တွင် qt3's gtk4 နှင့် KDE 3's Gnome4 တို့၏နောက်ကွယ်တွင်ရှိသည်။
သူကကျွန်တော့်ကိုရှင်းပြနိုင်မလားမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်စိတ်ကူးက KDE ကိုအဆင့်အမြင့်ဆုံးပတ် ၀ န်းကျင်အဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်။ သူကဆက်ပြီးတိုးတက်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော် ၀ မ်းသာမိတယ်။
ဟုတ်ပါသည်၊ KDE သည်လက်ရှိတွင်အပြည့်စုံဆုံးပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်သည်😀
ငါသည်ငါ့ KDE နှင့်အတူပျော်ရွှင်မိပါတယ်, ငါပြီးသားငါ KDE <3 နှင့်အတူချစ်။ ဗားရှင်းအသစ်ထွက်လာချင်တယ်။
Citrus သည် LibreOffice ၏မျက်နှာသွင်ပြင်သစ်ဖြစ်လိမ့်မည်နည်း။
Android GS - Gnome-Shell အတွက်အစိမ်းရောင်အခင်းအကျင်း